यो पुस्तकको पहिलो भाग “प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू” हो। यी वचनहरूले अनुग्रहको युगको अन्त्यदेखि राज्यको युगको सुरुवातसम्मको परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, र ती पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई मानिसको पुत्रको बारेमा दिनुभएको सार्वजनिक गवाही हुन्। यी वचनहरू प्रकाशको पुस्तकका यी वचनहरूको पूर्णता पनि हुन्: “आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्छ सो, कान हुनेले सुनोस्।” यी वचनहरूले परमेश्‍वरले राज्यको युगमा सुरु गर्नुभएको प्रारम्‍भिक चरणको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो पुस्तकको दोस्रो भाग मानिसको पुत्रले आफूलाई औपचारिक रूपमा प्रकट गर्नुभएपछि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा बोल्‍नुभएका वचनहरूद्वारा निर्मित छ। यसमा विभिन्‍न प्रकारका वाणीहरू र वचनहरू समावेश छन्, यस छनोटमा विभिन्न प्रकारका वाणीहरू र वचनहरू सामेल छन्, जस्तै अगमवाणी, रहस्यहरूको प्रकाश, र जीवनको बाटो, जसको विषयवस्तु एकदम समृद्ध छ—त्यहाँ राज्यको भविष्यका लागि दिइएका अगमवाणीहरू, परमेश्‍वरको व्यवस्थापन योजनाका रहस्यहरूका प्रकाशहरू, मानव स्वभावको विश्लेषण, उत्साहहरू र चेतावनीहरू, कठोर न्यायहरू, सान्त्वनाका हृदयस्पर्शी वचनहरू, जीवनको चर्चा, प्रवेश गर्ने विषयमा उपदेश, र यस्तै अन्य कुराहरू छन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, साथै परमेश्‍वरको स्वभाव सबै उहाँको काम र उहाँका वचनहरूमा व्यक्त गरिएका छन्। निश्चय नै, वर्तमान देहधारणमा परमेश्‍वरको मुख्य काम सजाय र न्यायको माध्यमद्वारा उहाँको स्वभाव व्यक्त गर्नु हो। यही जगको आधारमा, उहाँले मानिसमा अझ धेरै सत्यता ल्याउनुहुन्छ, र उसलाई अभ्यास गर्ने अझ धेरै तरिकाहरू देखाउनुहुन्छ, त्यसरी मानिसलाई जित्ने र उसको आफ्नै भ्रष्ट स्वभावबाट उसलाई मुक्त गर्ने उहाँको उद्देश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। राज्यको युगमा परमेश्‍वरको कामको पछि रहेको उद्देश्य यही हो। के तँ नयाँ युगमा प्रवेश गर्न चाहन्छस्? के तँ आफ्नो भ्रष्ट स्वभावबाट आफूलाई मुक्त गर्न चाहन्छस्? के तँ अझ उच्च सत्यता प्राप्त गर्न चाहन्छस्? के तँ मानिसको पुत्रको वास्तविक अनुहार हेर्न चाहन्छस्? के तँ यो जीवनलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन चाहन्छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध बनाइन चाहन्छस्? त्यसोभए तैँले येशूको पुनरागमनलाई कसरी स्वागत गर्न लागेका छस्?